Khiya Inut Yegrinder China Manufacturers & Suppliers & Factory
Khiya Inut Yegrinder - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Khiya Inut Yegrinder)
i-aluminium esindayo i-hex nut
i-aluminium esindayo i-hex nut Amantongomane e-Aluminium alungele izesekeli ze-drone, okwenza i-drone iyonke ibukeke inhle kakhulu. Emantongomane sinamantongomane amaningi e-aluminium, amantongomane angensimbi, amantongomane e-hexagon nuts ne-nylon hexagon nut esitokweni. Futhi amakinati we-aluminium okuzikhiya /...
i-m8 nylon faka ilokhi yokukhiya
i-m8 nylon faka ilokhi yokukhiya Emantongomane sinamantongomane amaningi e-aluminium, amantongomane angensimbi, amantongomane e-hexagon nuts ne-nylon hexagon nut esitokweni. Futhi amakhahlothi we-aluminium-self-yokukhiya / amantongomane we-aluminium yokuzikhiya enamantongomane we-flange angumkhiqizo othengiswayo....
I-M3 intambo i-nylon ifaka amantongomane okhiye wokukhiya
I-M3 intambo i-nylon ifaka amantongomane okhiye wokukhiya Ama-Lock-nuts (owaziwa nangokuthi amantongomane e-torque noma amantongomane aqine) amelana nokudlidliza & i-torque. Zitholakala ngokuyinhloko ngensimbi engagqwali nakwezinye izinqenqema. Isenzo sabo sokukhiya sakhiwe ngokuchithwa kwemicu yabo ephezulu...
I-Flange nati m6 yokukhiya
I-Flange nati m6 yokukhiya Amantongomane okuzikhiya kwe-Aluminium alungele izesekeli ze-drone, okwenza i-drone iyonke ibukeka yinhle kakhulu. Emantongomane sinamantongomane amaningi e-aluminium, amantongomane angensimbi, amantongomane e-hexagon nuts ne-nylon hexagon nut esitokweni. Futhi amakhahlothi...
Khiya umsoco ngesikulufa set
Khiya umsoco ngesikulufa set Amantongomane afakelwe i-nylon angasebenza ngomusa ukulwa. Simukelekile ngezinto eziningi, i-Nylon Nut, i-Stainless Steel Nut, i-Aluminium Nut ne-ect KumaNuts Insimbi Engagqwali, sine-Stainless Steel Knurled Nut, Stageless Cage Nut, iStainless Hex Nutt ne-ect Inkonzo yethu * Imidwebo,...
Yenza ngokwezifiso ilokhi yokukhiya ye-m2 aluminium
Yenza ngokwezifiso ilokhi yokukhiya ye-m2 aluminium Amantongomane e-Aluminium alungele izesekeli ze-drone, okwenza i-drone iyonke ibukeke inhle kakhulu. Emantongomane sinamantongomane amaningi e-aluminium, amantongomane angensimbi, amantongomane e-hexagon nuts ne-nylon hexagon nut esitokweni. Futhi amakinati...
I-aluminium wheel self-yokukhiya amantongomane
I-aluminium wheel self-yokukhiya amantongomane Amantongomane afakelwe i-nylon angasebenza ngomusa ukulwa. Simukelekile ngezinto eziningi, i-Nylon Nut, i-Stainless Steel Nut, i-Aluminium Nut ne-ect Okwezinkomo ze-aluminium, sine-Aluminium Barrel Nut, Aluminium Blind Rivet Nut, Injection Molded Aluminium Nut ne-ect...
I-M5 yokuzikhiya ye-Flange Aluminium Alloy Nylon Nut
I-M5 yokuzikhiya ye-Flange Aluminium Alloy Nylon Nut I-aluminium nati ene-flange iyi-nati enefreyithi ebanzi ekugcineni eyodwa esebenza njenge-washer ehlanganisiwe, engasindi. Lokhu kusebenza ukusabalalisa ingcindezi yenadi ngaphezulu kwengxenye evikelekile. ukunciphisa amathuba okulimazeka kwengxenye futhi ikwenze...
Insimbi Engagqwali M6 Ukukhiya Izilokazane Zomthambo
Insimbi Engagqwali M6 Ukukhiya Izilokazane Zomthambo Isingeniso Somkhiqizo Sinezinsimbi zokucindezela ukhiye ukhiye wamantongomane ama-SS. Insimbi Engagqwali M6 Ukukhiya Izilokazane Zomthambo luhlobo lwenki yokukhiya i-SS. Ama-Stainless Steel M6 Locking Lug Nuts ahlala ngombala wemvelo. Ngaphandle Kwensimbi...
I-M4 Aluminium Ukuzikhiya Nut Nge Flange Kanye Bolt
I-M4 Aluminium Ukuzikhiya Nut Nge Flange Kanye Bolt Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium nati ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Imvamisa esetshenziswa ekhaya nasendlini yamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano wemikhumbi kanye neminye imboni yemishini. Ama-M4 Aluminium Lock Nuts...
I-M3 Aluminium alloy nati nylon yokuzikhiya enamantongomane e-flange
I-M3 Aluminium alloy nati nylon yokuzikhiya enamantongomane e-flange Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium nati nge-flange izothathelwa indawo enhle ngezezimboni nezokwakha. Kusetshenziswe kabanzi ezindlini nokusebenza kwamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano wemikhumbi kanye neminye imboni yemishini. I-aluminium...
I-M3 anemibala ye-aluminium yokuzikhiya ye-multirotor
I-Hobbycarbon M3 enemibala ye-aluminium yokuzikhiya ye-multirotor I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ku-Carbon fiber kanye ne-hardware cishe iminyaka eyishumi. Ukuze uhlangabezane nesidingo samakhasimende amaningi, senza izinhlobo eziningi zehadiwe esitokisini njenge-aluminium standoff, isikulufa, iNut...
Khiya i-Nut nge-serated Flange Aluminium Fasteners
Khiya i-Nut nge-serated Flange Aluminium Fasteners Hobbycarbon Isingeniso Somkhiqizo Izingxenye ze-CNC cindezela i-nut faka i-PEM self clinching nati, amantongomane wokuphrinta insimbi engenacala angenacala asetshenziselwa i-drone. Futhi amantongomane angensimbi, amantongomane e-Aluminium ne-Aluminium Serrated Against...
I-M3 Green aluminium yokukhiya okonga i-hexacopter
I-Hobbycarbon M3 Green aluminium yokukhiya okonga i-hexacopter I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ku-Carbon fiber kanye ne-hardware cishe iminyaka eyishumi. Ukuze uhlangabezane nesidingo samakhasimende amaningi, senza izinhlobo eziningi zehadiwe esitokisini njenge-aluminium standoff, isikulufa, iNut...
I-M3 red aluminium yokuzikhiya okhiye we-drone
I-Hobbycarbon M3 ebomvu ye-aluminium yokuzikhiya okhiye we-drone I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ku-Carbon fiber kanye ne-hardware cishe iminyaka eyishumi. Ukuze uhlangabezane nesidingo samakhasimende amaningi, senza izinhlobo eziningi zehadiwe esitokisini njenge-aluminium standoff, isikulufa, iNut...
I-Hobbycarbon Aluminium yokuzikhiya okhiye bezindiza enophephela emhlane
I-Hobbycarbon Aluminium yokuzikhiya okhiye bezindiza enophephela emhlane I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ku-Carbon fiber kanye ne-hardware cishe iminyaka eyishumi. Ukuze uhlangabezane nesidingo samakhasimende amaningi, senza izinhlobo eziningi ze-Hardware ezifana ne-aluminium standoff, isikulufa,...
I-aluminium M3 i-flange yokukhiya i-FPV drone
I-Hobbycarbon Aluminium M3 i-Flange yokukhiya eyi-FPV yedrone iyathengiswa Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium nati nge-flange izothathelwa indawo enhle ngezezimboni nezokwakha. Kusetshenziswe kabanzi ezindlini nokusebenza kwamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano wemikhumbi kanye neminye imboni yemishini. I-M3...
I-OEM ne-ODM 7075aluminum nylon yokukhiya i-flange nati
I-OEM ne-ODM 7075aluminum nylon yokukhiya i-flange nut Hobbycarbon yomjaho Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium nati nge-flange izothathelwa indawo enhle ngezezimboni nezokwakha. Kusetshenziswe kabanzi ezindlini nokusebenza kwamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano wemikhumbi kanye neminye imboni yemishini. I-M3...
I-Anodized M3 Aluminium yokukhiya ukhiye wokufaka i-Nylon
I-Anodized M3 Aluminium yokukhiya ukhiye wokufaka i-Nylon Isingeniso Somkhiqizo Ngokuvamile, i- Aluminium nati ekusebenzeni kwenqubo ngenxa yokudlidliza nezinye izizathu zizothukululwa, ukuze uvimbele lesi simo, ngakho-ke sakha i- aluminium nati ngensimbi yokufaka. I-aluminium nati enokhiye wokufaka umsebenzi wayo...
Khiya Inut Yegrinder Khiya iNut yeGrinder Khiya i-Nut endaweni Khiya Nut Covers Khiya i-Nut ye-Screw Khiya i-Nut yeRim Khiya Nut for Rims Khiya i-Nut Bike